ICT for Myanmar: March 2008
Oh how interesting musical instrument---------
A rare piano-forte is found in Myanmar ( Burma ) .It was produced in 1809 by SCHIEDMAYER & SOEHNE STUTTGART , GERMANY and imported to myanmar in 1813.
At that time , Burma was ruled by Burmese Kings. Burma had been become under the British colonial rule in 1885 .
This aging musical instrument will tell something about the history and it will surely represent the history in one way or another .
The old upright piano survied many wars such as Anglo-Burmese Wars , Fiest World War and Second World War .
It seems still intact like an old gentleman. It's body is made of oak.
The name and emblem of the company who produced the piano is clearly found on the persumably bronze plate.
It is known thatamusical instrument called " PianoeForte " was first produced by an Italian named Cristofori in 1711.
England first saw it in 1760.Later , in Victorian times , no middle -class home was complete withoutapiano.
Someone who interested in this historically valuable piano should contact ---------------------------
Gmail: soesoe.santosa@gmail.com, thircho@gmail.com, sparrow.enics@gmail.com
အသုံးတည့်တဲ့ Program လေး
အင်တာနက်ပေါ်မှာလျှောက်သွားရင်းနဲ့အသုံးတည့်တဲ့ Program လေးတခုတွေ့တာနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ...
CV form တွေလုပ်ကြရပါတယ်...ဒါကလည်းခေါင်းစားစရာကိစ္စတခုပါ...
CVitae ဆိုတဲ့ Program လေးကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ထားလိုက်ပါ...
ပြီးရင် သူက ဖြည့်ခိုင်းတာလေးတွေကိုတာ အေးအေးလူလူဖြည့်လိုက်ပါ...
အားလုံးဖြည့်ပြီးရင်တော့ Refresh CV ဆိုတာလေးကို နိှပ်လိုက်တာနဲ့ချစ်စရာ၊ စွဲမက်ဖွယ်ရာ CV form လေးကို
ရပြီပေါ့ဗျာ... ရလာတာကို Save လုပ်မလား... Print ထုတ်မလား ကြိုက်သလိုစီမံပေါ့ဗျာ..
သူ့ကို ဒီမှာ Download လုပ်လို့ရပါတယ်... Download CVitae
Program ရဲ့ screen shot ကို တင်ပေးထားပါတယ်...
It is not hard to say things; but it is harder to do them
There were many mice inahouse. The man of the house gotacat. The cat killed many of the mice.
Then the oldedst mouse said," All mice must come to my hole tonight, and we will think what we can do about this cat".
All the mice came. Many mice spoke, but none knew what to do. At lastayoung mouse stood up and said," We must putaball on the cat.
Then, when the cat comes neat, we shall hear the bell and run away and hide. So the cat will not catch any more mice."
Then the old mouse asked," Who will put the bell on the cat?"
At last he said," it is not hard to say things; but it is harder to do them."
Happy Birthday Virus ကိုဒီလိုလေးရှင်းကြရအောင်
ဒီရက်ပိုင်းမှာ Happy Birthday - Virus ပြန့်နေတယ် …
ဒီမှာတော့ အင်တာနက်ဆိုင်၊ ဓာတ်ပုံဆိုင်၊ ဗီနိုင်းဆိုင်တွေကနေတစ်ဆင့် ကူးစက်လာတာများတယ် …
ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဖြေရှင်းနည်းက …..
ဒီကောင်က windows စတတ်တာနဲ့ အသုံးပြုရတဲ့ ntldr ဆိုတဲ့ဖိုင်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်တာဗျ ..။
ntldr ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို Windows ရှိတဲ့ drive ထဲ ကော်ပီပြန်ကူးထည့်လိုက်ရင်သူကချက်ချင်းပြန်ဖျက်ပစ်လိ မ့်မယ် .။ဖျက်နေတဲ့ process မပြီးခင် ကွန်ပျူတာကို restart ရအောင်လုပ် ..။
အဲပြောဖို့ကျန်ခဲ့လို့ဒီကောင်က registery ထဲမှာလည်းဝင်ပြင်ထားသေးတော့ registery ကိုလည်းပြန်ပြင်ပေးရမယ် ..။ registery ပိတ်ထားလို့ စိတ်ပူပါနဲ့
‘© Doug Knox - rev 12/06/99
ဆိုတာကို ကူးပြီး .vbs နဲ့သိမ်းလိုက် ..။ အဲဒီဖိုင်က registery ကို enable ပြန်လုပ်ပေးလိမ့်မယ် ..။
(တကယ်လို့ ဒီ coding တွေကိုလုပ်ရတာအဆင်မပြေရင် Ulitmate washer ဆိုတဲ့ program သေးသေးလေးနဲ့ registery editor ကိုပြင်လို့ရပါတယ်..
ဒီနေရာမှာသွားပြီး download လုပ်ပါဗျာ... Download Ultimate Washer )
အဲဒီတော့ အဆင့် ၁ အနေနဲ့
virus ၀င်နေတဲ့ ကွန်ပျူတာကို စီဒီနဲ့ ntldr ရယ် အပေါ်က vbs ဖိုင်လေးရယ်ကူးထည့်
(၂)vbs ကိုအရင်ဆုံး run
(၃) ntldr ကို windows ရှိတဲ့ drive ထဲကို copy & paste လုပ်
virus ကချက်ချင်းပြန်ဖျက်ပစ်လိမ့်မယ် ..။
(၄)ဖျက်နေတဲ့ process မပြီးခင် ကွန်ပျူတာကို restart ရအောင်လုပ် .။
(၅) save mode နဲ့တတ် ..
(၆)msconfig က start up မှာ explorer ဆိုတာကိုဖျက်ပစ် ..
(၇)registery ထဲကို၀င် ..
(၉)HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Microsoft\_SharedTools\_MSConfig\_startupreg ထဲက explorer.exe ပါနေတဲ့ value တွေကို ဖျက်ပစ်လိုက် ..။
ကွန်ပျူတာကို restart ပြန်လုပ်လိုက်တာနဲ့ နဂိုအတိုင်းပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရနိုင်မှာပါ .။
ntldr ဖိုင်ကို တစ်ခြား windows ကနေကော်ပီလုပ်ယူရမှာနော် …။ windows ရှိတဲ့ drive ထဲမှာ သူ့ကို hide လုပ်ထားတယ် .။ အဲဒီဖိုင်လေးကိုရှာပြီးကူးထည့်ရမှာ ..။virus ကပြန်ဖျက်တဲ့အချိန်မှာလည်း ချက်ချင်း restart လုပ်နိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်ဗျို့…။
SOURCE : http://sayaba.wordpress.com/2008/02/22/happy-birthday-virus/
Give me your time,please...........
The father was furious, "If the only reason you asked that is so you can borrow some money
to buyasilly toy or some other nonsense, then you march yourself straight to your room and go to bed.
Think about why you are being so selfish.I work hard everyday for such this childish behavior."
"I've been thinking, maybe I was too hard on you earlier," said the man,"It's beenalong day and I took out my aggravation on you.
Here's the $10 you asked for."
The little boy sat straight up, smiling."Oh, thank you daddy!" He yelled.
Then, reaching under his pillow he pulled out some crumpled up bills.The man, seeing that the boy already had money, started to get angry again. The little boy slowly counted out his money, then looked up at his father.
"Why do you want more money if you already have some?" the father grumbled."Because I didn't have enough, but now I do," the little boy replied.
"Daddy, I have $20 now.Can I buy an hour of your time? Please come home early tomorrow.I would like to have dinner with you".
Share this story with someone you like..But even better, share $20 worth of time with someone you love.
We should not let time slip through our fingers without having spent sometime with those who really matter to us, those close to our hearts. If we die tomorrow, the company that we are working for could easily replace us inamatter of days.
But the family & friends we left behind will feel the loss for the rest of their lives. And come to think of it,we pour ourselves more into work than to our family an unwise investment indeed.
SOURCE : Jr.enics
မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာနေတဲ့ ပိုလာဝက်ဝံရဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို ကြားဖူးပါသလား....?
အေးခဲတဲ့ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာ ပိုလာဝက်ဝံတွေဟာ ဘုရင်တစ်ဆူလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် အက်စကီးမိုး လူမျိုးတွေက ဘာမှ
ဘယ်လိုဖမ်းသလဲဆိုတော့ အက်စကီးမိုးတွေက ဖျံတစ်ကောင်ကို အရင်သတ်လိုက်ပြီး ဖျံရဲ့သွေးကို ပုံးတစ်ခုထဲ
ထည့်ထားလိုက်တယ်။ အသွားနှစ်ဖက်ပါတဲ့ ဓါးမြှောင်ကို သွေးထဲမှာ စိုက်ထားလိုက်တယ်။ အရမ်းအေးတဲ့အတွက် ဖျံသွေးဟာ
အချိန်တိုအတွင်းမှာ ခဲသွားပါတယ်။အဲဒီခဲသွားတဲ့ ဓါးမြှောင်ပါတဲ့ ဖျံသွေးကို ပုံးထဲကထုတ်ပြီး ရေခဲပြင်မှာ ပစ်ထားလိုက်ရုံပါပဲ။
၀က်ဝံတွေက သွေးအရမ်းကြိုက်တယ်။ အဲဒီအကြိုက်ကပဲ သူတို့ကို သေမင်းလက်ထဲ ရောက်စေခဲ့တယ်။ အနံ့ခံကောင်းတဲ့
သူတို့ဟာ သွေးညှီန့ံကို အဝေးကြီးကတောင် ရနိုင်ပါတယ်။ အက်စကီးမိုးတို့ ပစ်ထားတဲ့ သွေးခဲကို ခြေရာခံပြီး တွေ့တာနဲ့
အငမ်းမရ လျှာနဲ့ စတင်လျက်ပါတော့တယ်။ လျက်ရင်း လျက်ရင်း လျှာခဲသွားလည်း အစာကောင်းကို လက်မလွတ်ချင်တာနဲ့
ဆက်လျက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ခဲနေတဲ့သွေးက ပိုချိုလာတယ်။ ပိုလတ်ဆတ်လာတယ်။ ပိုပူနွေးလာတယ်ဆိုကို
လျက်လေ အရသာရှိလေ၊ အရသာရှိလေ လျက်လေနဲ့ သူတို့ရဲ့သွေးကို သူတို့ သောက်နေမိမှန်းတောင် မသိကြတော့ပါဘူး။
အကြောင်းက သွေးခဲအလယ်မှာ စိုက်ထားတဲ့ ဓားက လျက်နေတဲ့ သူတို့လျှာကို လှီးဖြတ်နေခဲ့လို့ပဲ။ အအေးဓာတ်ကြောင့်
ထုံနေတဲ့ လျှာက နာကျင်တာကို မခံစားမိတော့ဘူး။ အနံ့ခံကောင်းတဲ့ နှာခေါင်းက လတ်ဆတ်တဲ့ သွေးန့ံရလေ လျက်နှုန်းက
မြန်လေလေ နောက်တော့ ကိုယ့်သွေးကို ကိုယ်ပြန်သောက်နေမိတော့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သွေးထွက်လွန်ပြီး
မူးလဲသွားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အက်စကီးမိုးတွေက သူတို့ကို ဘာအင်အားမှ မသုံးဘဲ ဖမ်းလိုက်ရုံပါပဲ။
ဘဝရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကို ရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆတွေ လဲွမှားခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ဟာလည်း
ပိုလာဝက်ဝံနဲ့ တူသွားနိုင်တယ်။ တစ်ချို့လူတွေက အလုပ်ချိန် များများလုပ်လေ ပိုအောင်မြင်လေလေ ၀င်ငွေများများ
ရလေလေလို့ ထင်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ အဲဒီငွေကြေးကို ဖြုန်းဖို့ အချိန်မရှိခဲ့ကြဘူး။ တစ်ချို့က အဲဒီငွေကြေးကို
၀င်ငွေများလာတာနဲ့နည်းတူ တစ်ဖက်မှာလည်း တစ်ချို့အရာတွေကို သူတို့ဆုံးရှုံး ကြရတယ်။ လူ့ဘဝရဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံး
အရာဖြစ်တဲ့ မိသားစုနဲ့အတူနေတဲ့ အချိန်တွေ၊ နွေးထွေးတဲ့ မိဘမေတ္တာငတ်နေတဲ့ သားသမီးတွေ၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊
အမေရိကားရဲ့ အပတ်စဉ် ဂျာနယ်တစ်ခုက အငြိမ်းစားယူကုန်ကြတဲ့ ထိပ်သီးစီးပွါးရေး ပညာရှင် ဆယ်ဦးကို မေးခွန်းမေးပြီး
စာရင်းလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ မေးခွန်းက “ တကယ်လို့ ဘဝကို အသစ်ပြန်စရရင် သင်အမျှော်လင့်ဆုံးနဲ့ လက်မလွတ်ချင်ဆုံးအရာက
ဘာလဲ” တဲ့။ ပညာရှင် ခုနှစ်ဦးက တူညီတဲ့ အဖြေကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ အဖြေက “ တကယ်လို့ ဘဝကို အသစ်ပြန်စရရင်
တစ်ချို့လူတွေက ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် နောင်တမရဘူးလို့ ပြောတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မဆုံးဖြတ်ခင် သေချာ မစဉ်းစားခဲ့ရင်
နောက်ဆုံးတော့ နောင်တ ရကြစမြဲပါပဲ။ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောဖူးပါတယ်။ ငွေဟာ
ရှာလို့မကုန်နိုင်တဲ့ အရာပါတဲ့... ရှာလေလေ ရလေလေ လိုချင်လေလေ နောက်ဆုံးတော့ လုံလောက်ပြီလို့ မထင်ဘဲ
ငွေနောက်ကိုပဲ ကောက်ကောက်ပါ ကုန်ကြတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပိုလာဝက်ဝံလို ကိုယ့်သွေးကို သောက်ပြီး
တင်းတိမ် ရောင့်ရဲနိုင်တဲ့လူက ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲဘူး။ မတင်းတိမ်နိုင်တဲ့လူက အမြဲဆင်းရဲနေတယ်။
(သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပို့လာတဲ့ email လေးကိုပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်... မူရင်းစာရေးသူဘယ်သူလဲမသိပါ။ ခွင့်မတောင်းပဲကူးယူခြင်းကိုခွင့်လွှတ်ပါရန်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။)
It is not hard to say things; but it is harder to ...